12 | March | 2013 | Danya Wadi
By danyawadi March 12, 2013 Leaveacomment
The Best Doccuments of Rohingyas in Burma,အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ :Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition) By danyawadi March 1, 2013 N.D.P.D. presentation for the native inhabitants (Whose Faith Is Islam) residing in Rakhine State (Arakan State) as the citizen by law and by natural or birth right as well as the indenous national of Republic […]
alaysia Relif Association NGO အဖွဲ့ မှ ရခိုင်မှ ဒုက္ခသည်များ အတွက် ထပ်မံ သွားရောက် လှူဒါန်း ပြည်တွင်း သတင်း မတ်လ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃ M-Media MRA(Malaysia Relif Association) ရဲ့ ဥက္ကဌ ဒါတွတ် ဒေါက်တာ အဗ်ဒူလ် ရာဇတ်ကေချစ်က်(Dato ‘Dr. Abdul Razak Kechik) ဦးဆောင်သည်ှကူညီထောက်ပံရေး အဖွဲ့ တစ်ခုကို ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ မတ်လ ၃ ရက်နေ့က စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် အောင်မင်္ဂလာ၊ သဲချောင်း၊ တာပိုင်၊ သက်ကယ်ပြင်၊ ရွှေစေတီ၊ စက်ရုံစုနှင့် မင်းဂံ စသည့် ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ သွားရောက်၍ အကူအညီများပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း […]
ဘာတဲ့လဲ ငြိမ်းချမ်းရေး (ကဗျာ- M-Media Blog ကဏ္ဍ)
ဘာတဲ့လဲ ငြိမ်းချမ်းရေး (ကဗျာ- M-Media Blog ကဏ္ဍ) ကဗျာ မတ်လ ၁၁ ၊ ၂၀၁၃ မောင်ဘုန်းနိုင် ပြောကြတယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ္ဘာမှာ သူတို့လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်တတ်သယောင် ဗလပွ ဟိုနား ဒီနား ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုတဲ့ သင်္ကန်းစည်း အရေခြုံတွေကိုယ်တိုင်က ဟိုတပါး ဒီတပါး ၉၆၉ ထိပ်စီးနဲ့အမုန်း အာဃာတ မိစ္ဆာအမှောင့် တရားဟောနေလေရဲ့။ ဒီမိုကို ခရေဇီနေတဲ့ အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူဆိုလား ကြားနေ အမှန်တရား သတင်းသမားတွေဆိုလား တေလေကြမ်းပိုးတွေ မုန်းတီးရေးမိစ္ဆာတွေ ၉၆၉ ထိပ်စီးနဲ့တို့မီး ရှို့မီးလုပ် နေ့ခင်းကြောင်တောင် အကြမ်းဖက်နေတာကို ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဘုရား မှ အားမနာ ကုလားမုန်းတဲ့ […]
ရခိုင်မှ ထွက်ပြေးလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၁၂၆ ဦး မလေးရှားရေတပ် ကယ်ဆယ် ပြည်တွင်း သတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း မတ်လ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃ M-Media Teluk Bahang ရှိ ရေလုပ်သားများ၏ သတင်းပေးပို့မှုကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံသို့ လှေဖြင့် ၀င်ရောက်လာသော အစာရေစာ ပြတ်လတ်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၁၂၆ ဦးကို မလေး ရှားရေကြောင်း သွားလာမှု ထိန်းသိမ်းရေး အေဂျင်စီ(MMEA)မှ မတ်လ ၉ ရက် စနေနေ့တွင် ကယ်ဆယ်လိုက်သည်။ နေ့လည့် ၂ နာရီခန့်တွင် MMEA မှ အရာရှိများက ထိုလှေငယ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရေများ စိမ့်ဝင်နေသည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ လှေငယ်တွင် အသက် ၂၀ မှ […]
အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်သည့် ဒတ်ခ်ျ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အစ္စလာမ်သို့ ကူးပြောင်း
အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်သည့် ဒတ်ခ်ျ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အစ္စလာမ်သို့ ကူးပြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်း မတ်လ ၅ ၊ ၂၀၁၃ M-Media အမ်စတာဒမ်။ ။ ဟော်လန် နိုင်ငံရေးသမား ဂျာတ် ၀ိုင်းလ်ဒါး (Geert Wilder) ၏ ရှေးရိုးစွဲ ပါတီကို ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သူသည် အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် မွတ်စလင်များ အကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာပြီးနောက် အစ္စလာမ် သာသနာသို့ သက်ဝင်လာခဲ့သည်။ “လူတွေက သံသယတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျနော်နားလည်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တော်တော်များများက မထင်ကြဘူးလေ။ ဒါဟာ တော်တော်ကြီးမားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် ချမှတ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။” ဟုအာနော့ဒ် ဗန်ဒေါန်(Arnoud Van Doorn) က အလ်ဂျာဇီးယား သတင်းဌာန သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေါန်၏ […]
Sunday, March 10, 2013 Arakan Burma, Mogh, Rakhine, Rohingya Maungdaw, Arakan State: A Rakhine villager was caught by Rohingya villagers in Maungdaw Town on 9th March, at around 4:00 am while he was trying to set fire in Rohingya houses, saidabusinessman from the locality on condition of anonymity. “The Rakhine man was caught […]